🥇 Nlekọta edozi ụlọ mma
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 91
Nlekọta edozi ụlọ mma
Video nke njikwa edozi mma
Nye iwu njikwa ụlọ mma
Nchịkwa salonlọ Mkpa Mma bụ otu n'ime usoro kachasị dị iche iche n'ọrụ mmadụ. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, ọ nwere ọdịiche nke ya nke na-emetụta nzukọ, njikwa, usoro ọrụ na ọzụzụ nke ndị ọrụ. Mmemme usoro nlekọta beautylọ Mmanya na-adịghị mma (ọkachasị mmemme njikwa ụlọ ọrụ, nke ụfọdụ na-anwa ibudata n'efu na )ntanetị) na-akpatakarị ọdịda, na enweghị nkwado teknụzụ dị mma na-eduga na ọnwụ nke data anakọtara wee banye. N'ọdịnihu, nke a na-akpata enweghị oge maka ndị ọrụ iji mepụta njikwa dị mma nke thelọ Mmanya ahụ, yana njikwa, ihe onwunwe na nyocha, njikwa ndị ọrụ na ọzụzụ na salonlọ Mmanya mara mma, wdg. Ihe ngwọta kachasị mma na ngwa ọrụ iji bulie ọrụ nke ụlọ ọrụ gị n'ọnọdụ a ga-abụ akpaaka nke njikwa salonlọ Mmanya mara mma. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere mmasị ịhazi usoro njikwa njikwa dị elu (ọkachasị, usoro nke njikwa ndị ọrụ yana ịchịkwa ọzụzụ ha), ọ gaghị ekwe omume ibudata ya n'efu na .ntanetị. Ngwaahịa sọftụwia kachasị mma nke nwere ike ịnagide ọrụ a bụ mmemme njikwa ụlọ ọrụ mara mma nke USU-Soft, nke na-enyere gị aka itinye akpaaka nke akụrụngwa, nyocha, ndị ọrụ na njikwa njikwa na ebe a mara mma, yana mgbakwunye, ịchekwa oge na njikwa njikwa ihe eji eme ihe mara mma site na iji ozi sitere na mmemme anyị. The USU-Soft mma salon management usoro nwere ike ahaziri na ihe ịga nke ọma na-eji ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na mma ụlọ ọrụ: mma salonlọ Mmanya, mma studio, ntu salonlọ Mmanya, spa center, na solarium, ịhịa aka n'ahụ ,lọ Mmanya, wdg The USU-Soft dị ka a usoro nlezianya mara mma egosila na ọ kacha mma na Kazakhstan na mba ndị ọzọ CIS. Nnukwu ọdịiche dị n'etiti mmemme njikwa USU-Soft na ngwa sọftụwia yiri ya bụ ịdị mfe ya na ịdị mfe nke iji ya. The ọrụ-enye gị ohere iji nyochaa ihe ọmụma niile metụtara ọrụ nke gị salonlọ Mmanya bụ nnọọ adaba.
USU-Soft dị ka usoro mmemme beautylọ Mma mara mma dị mma maka onye isi, onye nchịkwa, nna ukwu salonlọ Mma, na onye ọrụ ọhụụ na-enweta ọzụzụ. Akụrụngwa njikwa sistemụ na-enye ohere nyochaa ọnọdụ ahịa, na-atụle atụmanya mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ. Ejirila ụdị akụkọ dị iche iche iji nyere onye njikwa aka ime nke a. Sọftụwia njikwa sọftụwia ga - abụrụ onye enyemaka dị oke mkpa onye njikwa ụlọ mma na - achịkwa ebe a na - achọ mma, ebe ọ na - enye ozi ọhụụ maka ịme mkpebi njikwa ziri ezi (dịka ọmụmaatụ, iji dochie ime ahụ, webata ọrụ ọhụrụ, ịzụ ndị ọrụ , wdg) n'oge kachasị dị mkpirikpi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, sistemụ nke akpaaka na njikwa nke salonlọ Mmanya mara mma na-enyere aka ngwa ngwa nhazi, yana ntinye na npụta nke ozi. Usoro nlekọta ahụ na-enye aka n'inyocha ọrụ nke salonlọ Mmanya Mara Mma, nke na-ahapụ oge ndị ọrụ gị iji dozie nsogbu ndị ọzọ (maka ọzụzụ iji mụta ụdị ọrụ ọhụrụ iji tinye n'ọrụ ndị a n'ọrụ yana, n'ihi ya, mee ka asọmpi nke ụlọ ọrụ gị). Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa na ebe ị na-achọ mma, ị ga-ahụ ọtụtụ atụmatụ bara uru na ọrụ gị. Nchịkwa njikwa nke ị ga-ejikarị bụ 'Ahịa'. Mgbe ị banyere modul a, ị ga-ahụ windo ọchụchọ data. Mgbe enwere otutu ndenye, ị nwere ike dozie njirisi ọchụchọ gị iji bulie ọrụ gị. Ugboro 'Sell Date from' ga-egosiputa ahịa niile na-amalite site na ụbọchị a kapịrị ọnụ. Iji mee ya, pịa akụ na akuku aka nri nke oghere oghere. Na mpio ahụ gosipụtara, ị nwere ike ịhọrọ otu afọ, ọnwa, ụbọchị ma ọ bụ tọọ ụbọchị nke ugbu a n'otu oge site na iji ọrụ 'Taa'. Fieldbọchị ''re ahịa na' ubi na-enye gị ohere igosipụta ahịa niile ruo ụbọchị ụfọdụ. Ala 'Ahịa' na-enye ọchụchọ maka otu onye. Iji họrọ otu onye ahịa, ị kwesịrị ịpị akara na akara ngosi atọ n'akụkụ aka nri nke ubi ahụ. Mgbe nke ahụ gasị, usoro nchịkwa na-akpaghị aka na-emepe ndepụta nke nchekwa data ndị ahịa. Mgbe ịhọrọ onye ahịa achọrọ, pịa bọtịnụ 'Họrọ'. Mgbe nke ahụ gasị, ngwa njikwa na-akpaghị aka na windo nchọta mbụ. E gosipụtara onye ọrụ rere ya n'ahịa 'Sell'. Enwere ike ịhọrọ onye ọrụ a na ndepụta nke ndị ọrụ na nchekwa data. A na-eji mpaghara 'Ndebanye aha' maka ọchụchọ nke ndị ọrụ ahụ debanyere aha ire ere na ngwanrọ ahụ.
Kedu ihe kachasị mkpa na azụmaahịa ọ bụla na-enye ọrụ? Ọtụtụ ndị ga-ekwu na usoro obi ike maka njikwa, ihe ịga nke ọma na asọmpi n'ahịa, ikike iji dọta ndị ahịa. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-arụ ọrụ dị mkpa. Mana ka, ihe kachasị mkpa bụ ndị ahịa na ezigbo ndị ọkachamara. Ndị a bụ ihe abụọ, na-enweghị nke enweghị ịdị mma nke ụlọ mma mara mma agaghị ekwe omume. Ọ dị mkpa iji dọta ọtụtụ ndị ahịa dị ka o kwere mee, na-eji usoro dị iche iche nke mgbasa ozi, usoro ego, ego na nkwalite. Usoro nlekọta ihe eji eme ụlọ anyị mara mma ga - enyere gị aka na nke a, ebe ọ nwere nnukwu ọrụ. Usoro nchịkwa na-emepụta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akụkọ. Ga-ahụ ihe mgbasa ozi na-arụ ọrụ ma na-adọta ndị ahịa na ihe na-adịghị, ka ị ghara iji ego mee ihe efu ma duzie ya maka ihe azụmahịa gị chọrọ. Ma ọ bụ na e nwere akụkọ na-egosi isi ihe mere ndị ahịa ji ahapụ ụlọ ịma mma gị. Will ga-aghọta ihe kpatara nke a, na n'ọdịnihu ị mee ihe niile iji gbochie ya. Ọ dị mkpa ọ bụghị naanị ịdọta ndị ahịa, kamakwa idowe ndị ahịa ochie. Ọ bụrụ na ha abanye na ndị ọbịa VIP, ha na-aghọ isi iyi ego a pụrụ ịdabere na ya wee weta uru kachasị kwụsie ike. Ọ dị mkpa ịgba ndị ahịa dị otú ahụ ume ka ha nọgide na-abụ ndị ọbịa gị oge niile.
Salonlọ ndozi mma
na-aza ajụjụ maka edozi isi
na-aza ajụjụ maka omenkà
aza maka salonlọ Mmanya
aza ajụjụ maka ntutu isi
aza ajụjụ maka solarium
edekọ ndekọ maka salons mara mma
Akaụntụ ndị ahịa nke clientslọ Mmanya
aza ajụjụ maka ihe ndị a na-achọ mma
mkpesa nke ihe na edozi isi
aza ajụjụ maka ụlọ ahịa ụlọ ahịa
Akpaaka ụlọ ahịa
Nlekọta ụlọ ahịa barber
Mma imewe ngwa
Akụrụngwa mma ụlọ
Usoro njikwa ụlọ mma
Sọftụwia Mma Mma
Ihe omume komputa nke komputa di nma
Na-ejikwa ụlọ mma
Njikwa ụlọ ahịa na-akpụ akpụ
CRM maka ụlọ ahịa akpụ akpụ
CRM maka ụlọ ndozi
Usoro mmezi ntutu
Nlekọta edozi isi nke edozi isi
Ntinye ntutu ntutu
Ndenye akụkọ nke ndị ahịa nọ na ebe a na-achọ mma
Mmemme maka ọrụ ịchọ mma
Mmemme maka ime ụlọ edozi isi
Mmemme nke ndị na-akpụ isi
Mmemme maka ị na-ahụ maka ịre azụkọ
Ihe omume maka njikwa ụlọ ahịa
Mmemme maka omenka
Mmemme maka ịchekwa ụlọ ndozi mma
Mmemme maka njikwa ụlọ mma
Mmemme maka ụlọ nka mma
Mmemme maka ndị ahịa na-aza ajụjụ ụlọ ahịa mara mma
Mmemme maka ijikwa ụlọ mma
Mmemme maka ntutu isi
Mmemme maka ịdekọ ndị ahịa ụlọ ahịa mma
Mmemme maka ịdekọ ụlọ ndozi ịma mma
Mmemme nke solarium
Mmemme maka etiti SPA
Mmemme maka ime ụlọ nke SPA
Na-edekọ ndị ahịa maka sava mma
Mmemme dị mfe maka ụlọ ndozi mma
Nchịkwa nke Solarium
Sistem maka ụlọ ndozi mma